Pipe Column uPVC Miaraka amin'ny mpanamboatra Lock Power Patent
Sodina Sodina Snapshot fametrahana Hijery Range Download Katalana
Mampiditra pipa tsanganana
Ny fantsom-tsanganana no fantsom-pandefasana lehibe ao anaty fantsakana rano. Ampiasaina hanantona ireo paompy ao anaty lavadrano izy ireo ary hanatitra ny rano mipaka ho etỳ ambonin'ny tany hampiasana azy. Tsy ilaina intsony ny milaza azy fa ny fantsom-panafarana dia manakiana mafy ny tetikasa lavadrano / borewell.
Noho ny maha-zava-dehibe ny misiona amin'ny fantsom-pantsakana, dia tokony hofidina am-pitandremana ireo fantsom-panafody. Mila maharitra izy ireo, maharitra ary tsy mila fikojakojana kely fotsiny. Ny valiny dia mitoetra ao Vinyl uPVC Column Pipe
Nahoana no zava-dehibe ny faharetana?
Eny, ny fantsom-panafody dia mandray ny enta-mavesatra amin'ny rafitra iray manontolo izay misy: fantsona, paompy ary motera ary tariby, miaraka amin'ny lanjan'ireo rano mamakivaky ireo fantsona.
Izy ireo dia mitondra ny tsindry rano mandritra ny fandidiana sy ny marotoa rano rehefa manomboka sy manidy paompy. Izy ireo koa dia mila miaritra ny tory sy ny jerks vokarin'ny paompy.
Pair vinyl Column Pipe miaraka amin'ny
Famolavolana manokana ny Pipe Column uPVC
Inona no mahatonga ny fantsom-boalavo vinyl ho matevina tsara indrindra ho an'ny paompy ao anaty rano?
100% fanoherana ny harafesina: tsy misy harafesina = rano madio
0 Vidiny fikojakojana ny zero: tsy misy harafesina. Tsy mila fonosana
5x Faharetana avo lenta: Ny tanjaka avo lenta dia mahatonga azy ireo matanjaka sy azo antoka
60% Mandany vola: 60% mora kokoa noho ny fantsom-by vy na vy.
1/6 Ny lanjan'ny fantsom-by vy na vy: maivana tokoa dia mamela fametrahana mora foana, fitaterana, fikirakirana ary fanoloana.
Mitsitsia angovo 23%: Tsy dia ambonimbony kokoa ny friksi. Ahafahan'ny rano mikoriana mora, mila fanjifana angovo kely kokoa.
100% Tsy misy famoahana: ny Powerlock manana patanty dia manome antoka ny fantsom-pikatona 100% tsy misy famoahana sy famoahana entana.
Sarany avo: azo averina amin'ny fisondrotana 7%
Compounding tena tsara
Ny fantsom-bokotra Vinyl uPVC dia manana:
Mpamatsy vola manamafy
● Chloride polyvinyl: Vita amin'ny Unplasticized Polyvinyl Chloride izy ireo maivana nefa mafy.
● Fiasa mazava masontsivana: Ny fitadidiana ny fiasan'ny mahomby ao an-tsaina, ireo fantsona ireo dia vonona amin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana voatanisa Carbide. Natao ihany koa izy ireo handalo Annealing mba hiantohana ny faharetan'ny fantsona.
● Famolavolana azo ovaina: Ireo fantsona ireo dia namboarina manokana mba hampifanarahana ny tsindry ambony. Izy ireo koa dia matevina noho ny fanitsiana amin'ny halaliny lalina.
● Tanjaka avo lenta: Mba hizarana fanoherana avo lenta amin'ny tsindry, ireo fantson-drano ireo dia manana tanjaka avo sy mahazaka entana. Izy ireo koa dia manana tanjaka mekanika avo lenta.
● Thick and thin: Ny ampahany matevina sy manify an'ny fantsom-bokotra Vinyl dia novolavolaina tamin'ny fomba hafa handraisana ny tselatra feno vokarina noho ny motera ka niteraka faharetana.
● Azo antoka sy mety amin'ny halaliny lalina: Ireo Pipe UPVC Vinyl Column Pipe ireo dia namboarina hatramin'ny halalin'ny 1400 ft.
Flange mpiambina vy malefaka
Stainless Steel - Adiresy ambony 304
Adapter ambony vy malefaka
Tsorakazo tsy misy fangarony ampiasaina amin'ny Guard Guard
Izy ireo dia 200% mahery noho ny fantsom-by. Ny fantsona uPVC dia novokarina tamim-pahombiazana mba hanazavana azy ireo mavesatra nefa tsy misy marimaritra iraisana amin'ny tanjaky ny heriny.
Ny Column Pipe avy amin'ny Vinyl dia misy friksi kely izay ahafahan'izy ireo mahazo rano bebe kokoa. Aorian'ny vanim-potoana fampiasana manokana dia mihombo ny fantson-by ary farany ny kalitaon'ny rano mihasimba. Satria tsy misy olana amin'ny harafesina na harafesina ao amin'ny Vinyl Column Pipe, dia mijanona ho tsara ny kalitaon'ny rano.
Fitsipika fitantanana sy fitehirizana:
Ny vokatry ny hafanana ary azo antoka ve ny Fire Fire?
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fantsona uPVC?
Misafidiana paipa Column uPVC ho an'ny tetikadinao fitantanana rano amin'ny ho avin'ny rano